IBC-6.0 တွင် Vela 2019-Version Smart-Loggers ကိုသရုပ်ပြခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Vela 6.0-ဗားရှင်းစမတ်-logger IBC-2019 မှာသရုပ်ပြ
IBC-2019 ရောင်းသူနည်းပညာကို Preview ချက်ချင်းထုတ်ပြန်ရန် FOR
စက်တင်ဘာလ 13-17 2019
Vela 6.0 ဗားရှင်းစမတ်-logger IBC-2019 မှာသရုပ်ပြ
Clearwater, ဖလော်ရီဒါ, USA ။ သြဂုတ်လ 23, 2019။ Vela, QoS Alert များအတွက်အဓိကအားအသုံးပြုသောလိုက်နာမှုစောင့်ကြည့်ရေး, သစ်ခုတ်ခြင်းနှင့်မြင်ကွင်းစုံစနစ်များ၏ဦးဆောင်ပေးသူ, AirChecks / ကြော်ငြာအတည်ပြု, အပြိုင်အဆိုင်သတင်းနှိုင်းယှဉ်, အရောင်းအဖွဲ့ကိုဦးဆောင်မျိုးဆက်များအတွက်ပြိုင်ဘက် '' လိုင်းများပေါ်တွင်ကြော်ငြာ analysis နှင့်များအတွက်မူရင်းသို့မဟုတ် transcoded မီဒီယာများ၏ clipping နောက်ကျောဝေဟင်သို့မဟုတ်လူမှုရေး / ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာမှ repurposing, ယနေ့အမ်စတာဒမ်, နယ်သာလန်အတွက် IBC 6.0 မှာပြသခံရဖို့ Vela ခြုံငုံ 2019 ၎င်း၏လွှတ်ပေးရန်ကြေညာခဲ့သည်။
Vela ခြုံငုံ၏ဤ 6.0 လွှတ်ပေးရန် features အသစ်နှင့်အသုံးဝင်မှုရှိစေရန်တိုးမြှင့်တစ်ဦးကယျြပွနျ့အစုံနှင့်အတူ Feature-rich, ပြည့်စုံခြင်းနှင့်အလွန်အမင်း-အရွယ်မှာခြုံငုံပလက်ဖောင်းချဲ့ထွင်, သိသိသာသာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ထုတ်လွှင့်များ၏ workflow နှင့်စစ်ဆင်ရေးမြှင့်တင်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
AI အ / ML - ခြုံငုံ၏ဤနောက်ဆုံးဗားရှင်းမှာတွေ့ရှိအထင်ရှားဆုံးတိုးမြှင့်မှုများတစ်ခုမှာ, မျက်နှာများ, အသံ, အမှတ်တံဆိပ်ကိုအသိအမှတ်မပြုရန်, ရဝုဏ်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်မိုဃ်းတိမ်၌ဖြစ်စေ, စီးများစွာသို့မဟုတ်ရာနှင့်ချီသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ဖောက်သည်ကို enable AI အ / ML tools များ၏အပြည့်အဝ suite ကိုဖြစ်ပါတယ် အသံနှင့်ဗီဒီယိုပုံစံများနှင့်, နောက်ခံကိုဗီဒီယိုနဲ့ metadata ကိုပေါင်းစပ်။
တိုးတက်လာသောအကြောင်းအရာ / OTT နှိုငျးယှဉျ - အချို့သောအချိန်များအတွက် Vela ထုတ်လွှင့် input type ကိုမဆိုနံပါတ်နှင့်ပေါင်းစပ်ရာမှအကြောင်းအရာစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်တင်သွင်းဖို့ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ဒီနောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းနဲ့အတူ Vela တစ်ဦးသို့မဟုတ်အများအပြား OTT သို့မဟုတ် Cable ကိုအတူအရင်းအမြစ်အကြောင်းအရာနှိုင်းယှဉ်ဖို့ထူးခြားသောစွမ်းရည်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည် /ဂြိုဟ်တု/ ပြန်လာကြော်ငြာသို့မဟုတ်အကြောင်းအရာသွေဖည်ရာ၏အလိုအလျောက်ထောက်လှမ်းဘို့ feeds ။
NAB-2019 မှာ Vela အဘို့အမျိုးစုံ-ဆုအနိုင်ရသော features တွေ၏အချို့:
လိုက်နာမှုချိုးဖောက်မှုများ / အစီရင်ခံသတိပေးနခွေငျးအစွမ်းထက် QoS tools များနှင့်အတူလွယ်ကူသော-to-အသုံးပြုမှု interface ကို
, အမြင်တွေကိုတပြိုင်တည်းအလုပ်လုပ်ခိုင်းနှိုင်းနဲ့အသံကို / စာသားကိုမှတ်စုနှင့်အတူမှတ်စာရေးသွင်း, သူတို့ရဲ့သတင်းထုတ်ကုန်တိုးမြှင့်ဖို့သတင်းဒါရိုက်တာများအဘို့အ tools များနှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်သတင်းအစီအစဉ်များစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနှင့်အသံဖမ်း
ခြုံငုံ 6.0 တွင်ထည့်သွင်းသည့်အင်္ဂါရပ်များတစ်ဦးကသေးငယ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းအစု:
AI အ / ML အင်္ဂါရပ်များနှင့်အ Artificial Intelligence ရှာဖွေရေး၏ပေါင်းစည်းမှု
မှတ်စုများနှင့်ကွာဟမှုမှမြှင့်တင်ထိုကဲ့သို့သောခြေရာခံခြင်းအဖြစ်အင်္ဂါရပ်တွေကိုထည့်သွင်းကြောင်း module တွေလော့ဂ်အင်ဝင်နေပါသည်နှင့်နိုင်ငံရေးပါတီလေကြောင်းအချိန် tabulating
တစ်ဦးကဒေသခံ, browser ကိုဖြည့်ဖို့အလွန်အမင်း-စိတ်ကြိုက် software ကိုမြင်ကွင်းစုံများနှင့်မိုဘိုင်းဗားရှင်း
: အပါအဝင်နောက်ထပ်စံချိန်စံညွှန်းများ, များအတွက်ပံ့ပိုးမှု SMPTE 2110, ATSC 3.0, OKTA, ဒီဗွီဘီနှင့် SCTE-27 စာတန်းထိုးများ
အသစ်များပိုမို-အစွမ်းထက်အဆင့်မြင့်ထိပ်တန်းနှင့် CPU များနှင့်အတူ သာ. ကွီးမွတျရုပ်သံလိုင်းသိပ်သည်းဆ
"2019 ခုနှစ်, Vela အဖြစ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါသည် အ ဖြေရှင်းချက်အနေနဲ့အလွန့်အလွန် Feature-rich နှင့်ကြံ့ခိုင်အစုံနှင့်အတူအမြင့်ဆုံးသော-လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ရရှိနိုင်ပါယုံကြည်စိတ်ချရသော Volicon-အစားထိုးဖြေရှင်းနည်းများ၏မြင်သာထင်သာပံ့ပိုးပေး, "Gerry Boucher နိုင်ငံတကာအရောင်း၏ Vela ဒါရိုက်တာကဆိုသည်။ "ရဝုဏ်နှင့်တိမ်တိုက်ထဲမှာအပြေးတိုးမြှင့် Third-party ပေါင်းစည်းမှုနှင့် Vela Luna နှင့်ခြုံငုံနှင့်အတူ ... ကျွန်တော်ယခုထုတ်လွှင့်သိသိသာသာ သာ. ကြီးမြတ်အပေါ်တွင်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုနှင့်စွမ်းရည်၏တစ်ဖွဲ့လုံးကမ္ဘာသစ်ကိုဆက်ကပ်။ အထက် features အသစ်များ၏စာရင်းဗားရှင်း 6.0 ဖွကြောင်းသစ်ကိုစွမ်းရည် "သို့့ပြတင်းပေါက်ဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာတစ်ဝန်းအရောင်း၏ Vela ရဲ့ဒုတိယသမ္မတ, ကဲန် Rubin က 200 ထုတ်လွှင့်ကျော်ပြီးသားဝေးနေဖြင့်ဒီအာကာသအတွင်းဖြေရှင်းချက်များအလျင်မြန်ဆုံးကြီးထွားလာပံ့ပိုးပေး Vela အောင်ယခုနှစ် Vela အဖြစ်ပြောင်းလဲကြပါပြီ "ဟုပြောသည်။ IBC မှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် Vela များအတွက် EMEA ကနေဝယ်လိုအားစွမ်းရည်၏ Vela ရဲ့ပြည့်စုံတစ်စုံဘို့လိုအပ်ကြောင်းကိုအမေရိကန်ကန့်သတ်မပေးကြောင်းသက်သေအထောက်အထားဖြစ်ပါတယ်။ EMEA ထုတ်လွှင့်တိုင်းစနစ်၏အခြေခံစျေးနှုန်းအားလုံးကို features နဲ့ options ပါဝင်သော Vela ရဲ့စျေးနှုန်းမော်ဒယ်တကယ်တန်ဖိုးထားဟန် - ။ သူတို့ကိုအပြည့်အဝ-အထူးအသားပေးစနစ်များကိုခံယူခြင်းနှင့်တစ်ဦးသိပ် သာ. ကြီးမြတ်တန်ဖိုးကိုခံစားရန်ခွင့်ပြု "
Image ကို Links များ:
25 နှစ်အရွယ် Vela တစ်ခုEmmy®ဆုနှင့်လိုက်နာစောင့်ကြည့် '' အကောင်းဆုံး-of-ပြရန် / 'သစ်ခုတ်ခြင်းနှင့်' 'ကုန်ပစ္စည်း-of-the-တစ်နှစ်တာ' 'ဆု NAB-2019 မှာအနိုင်ရတဲ့, Smart logger စနစ်များအမြန်ဆုံး-ကြီးထွားလာပံ့ပိုးပေးသည်။
Vela ရဲ့ Luna / luna + မြင့်မားတဲ့တန်ဖိုးနှင့်ကြောင်းပြည်တွင်းရေး Air-စစ်ဆေးမှုများနှင့်ကြော်ငြာ-စိစစ်အတည်ပြုသည်-Run မှတ်တမ်းများနှင့်အတူပေါင်းစပ်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ-မြင်ကွင်းစုံ, QoS စောင့်ကြည့်ရေး / သစ်ထုတ်လုပ်ရေး / အာရုံစိုက်မိအောင်လုပ်နိုင်တယ်နှင့်ပို့ဆောင်ရေး Stream ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဖြင့်ဖမ်းယူ proxy ကိုအကြောင်းအရာ 24 × 7, တတ်နိုင် tools တွေကိုတစ်ခုကျယ်ပြန့် suite ကိုဆက်ကပ်။
Vela ရဲ့ ပတ်ဝိုင်း AI အ / ML ပေါင်းစည်းမှု, ratings graph, အရောင်းအဖွဲ့များအဘို့ခဲစာရင်းထုတ်လုပ်ပြိုင်ဘက်-ထုတ်လွှင့်စီးပွားဖြစ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, HLS ဖွ: အပါအဝင်, ယှဉ်ပြိုင်မှုစောင့်ကြည့်ရေးနှင့်အဆင့်မြင့် features တွေတစ်အိမ်ရှင် clipping ပြန်-to-air repurposing သို့မဟုတ် OTT / လူမှုရေးများအတွက်မူရင်းအရည်အသွေးကိုရိုက်ကူးဖြည့်စွက် ထုပ်ပိုးနှင့်ပိုပြီး။
Vela ထုတ်ကုန်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ-ဒေသခံမြင်ကွင်းစုံ / Video-နံရံများအဖြစ် virtualized ပတ်ဝန်းကျင်မှာနှင့်မိုဃ်းတိမ်၌ On-ရဝုဏ်အဆင့်မြင့်ထိပ်တန်းစွမ်းအားဖြင့်ကြသည် - လက်လှမ်း HTML ကို5browser များနှင့် iOS / Android မှာ APS ကနေ။ နှင့်၎င်းတို့၏ပြိုင်ပွဲ - Vela စမတ်-logger သူတို့ရဲ့တစ်ခုလုံးကိုဘူတာရုံ lineup မှအင်ဂျင်နီယာများနှင့်ဘူတာရုံ-အုပ်စုသည်စီမံခန့်ခွဲမှုအပြည့်အမြင်သာခြင်းနှင့်လက်လှမ်းမီသည်။ ၎င်း၏ကြီးမားသောအမေရိကန်အခြေစိုက်ရှိနေခြင်းနှင့်ဖောက်သည်အခြေစိုက်စခန်းနှင့်အတူ, Vela ကိုအမေရိကန်အတွက်က de facto Volicon အစားထိုးဖြေရှင်းနည်းကိုဖြစ်လာသည်နှင့် EMEA မြင့်မားဝယ်လိုအားအတွက်ယခုဖြစ်ပါတယ်။
ကဲန် Rubin က
ဒုတိယသမ္မတ - Worldwide မှအရောင်း
တယ်လီဖုန်း: + 1 407-506-3600
ကဲန် Rubin ကအားဖြင့်နောက်ဆုံးပေါ်ရေးသားချက်များ (အားလုံးကြည့်ရှု)
Vela 6.0-ဗားရှင်းစမတ်-logger IBC-2019 မှာသရုပ်ပြ - သြဂုတ်လ 22, 2019
ထုတ်လွှင့်လေးစားလိုက်နာသစ်ခုတ် ထုတ်လွှင့်-SocialMeida လိုက်နာမှုစောင့်ကြည့်ရေး ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor ပေါင်းစည်းမှု OTT SJGolden - စမတ်သစ်ခုတ် လှံ & Arrows စာတန်းထိုး, ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana, မီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေး, IBC ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း TVU ကွန်ယက် က Ultra HD ဖိုရမ် Vela ခြုံငုံ virtual reality Volicon 2019-08-22
ယခင်: Telestream PRISM မီဒီယာထုတ်ယူခြင်းပလက်ဖောင်းများအတွက် 25GE ကွန်ယက်ပံ့ပိုးမှုကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်
နောက်တစ်ခု: Rhode Island အင်ဒီများအတွက် bebob Micro ချွတ်ဒန် Kneece အင်အားကြီးနိုင်ငံများ